Bit By Bit - agba nwere - 4.5 Ime ka o mee
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ a nnukwu tech ụlọ ọrụ i nwere ike na-agba ọsọ digital nwere. Ị nwere ike ma na-eme ya onwe gị ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ gị na mmadụ ndị pụrụ inyere gị (ma onye i nwere ike inyere).
Site na nke a mgbe, m na-enwe olileanya na ị bụ obi ụtọ banyere nke ahụ, ohere nke na-eme gị onwe gị na dijitalụ nwere. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ a nnukwu tech ụlọ ọrụ ị nwere ike ugbua-eme ndị a nwere niile. Ma, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ a tech ụlọ ọrụ ị pụrụ iche na i nweghị ike na-agba ọsọ digital nwere. Ọ dabara nke ọma, na ihe ọ bụ; na obere creativity na ịrụsi ọrụ ike, onye ọ bụla nwere ike na-agba ọsọ a digital nnwale.
Dị ka a nzọụkwụ mbụ, ọ dị ịmata ọdịiche dị n'etiti isi ihe abụọ na-eru nso:-eme ya onwe gị ma ọ bụ partnering ahụ dị ike na. Na, e nwere ọbụna a di na nwunye nke ụzọ dị iche iche i nwere ike ime ya onwe gị; ị ike nnwale na ẹdude gburugburu,-ewu gị onwe gị na nnwale, ma ọ bụ ewu gị onwe gị na ngwaahịa maka ugboro ugboro experimentation. M ga-atụ ihe ndị a ọ na nza nke ihe atụ ndị dị n'okpuru, na mgbe ị na-amụ banyere ha ka ị ga-achọpụta otú ọ bụla obibia awade ahia-offs tinyere anọ na isi akụkụ: na-eri, na-achịkwa, nsiridi, na ụkpụrụ ọma (ọgụgụ 4.11). Ọ dịghị obibia bụ nile n'ọnọdụ.
Ọgụgụ 4.11: Nchịkọta nke ahia-offs maka ụzọ dị iche iche ị pụrụ ime ka gị nnwale eme. Site na-eri M pụtara na-eri na-eme nchọpụta na okwu nke oge na ego. Site akara m na-ekwu ike ime ihe ị chọrọ na okwu nke mmadụ n'ọrụ sonyere, randomization, na-anapụta agwọ ọrịa, ma atụ a ga esi. Site nsiridi M pụtara ókè nke mkpebi gburugburu ebe obibi ọkụ ndị okosobode ke ná ndụ kwa ụbọchị; mara na elu nsiridi bụghị mgbe niile dị mkpa maka ule chepụtara (Falk and Heckman 2009) . Site n'ụkpụrụ omume M pụtara ikike nke e ji ezi nzube-eme nnyocha jikwaa usoro ziri ezi nsogbu ndị nwere ike ibilite.